प्रतिबिम्बन कथासंग्रह लोकार्पण | eAdarsha.com
हेमजा । भाषा, साहित्य र अनुसन्धान कार्यमा संलग्न विष्णुप्रसाद शर्माको आठौं कृति प्रतिबिम्बन कथासंग्रह लोकार्पण गरिएको छ ।
सिर्जनशील लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठान पोखराद्वारा आयोजित कार्यक्रममा साहित्यकार विश्वप्रेम अधिकारी, तारा पाखे र संस्थाका अध्यक्ष योगराज पौडेलले उक्त कृतिको संयुक्त लोकार्पण गरेका हुन् । उक्त अवसरमा अधिकारीले निरन्तरको साधनाबाट मात्र सफल सिर्जना सम्भव हुने औँल्याए । कृतिमा १० कथा छन् ।
सो अवसरमा शर्माद्वारा लिखित उत्तरवर्ती साहित्य सिद्धान्तः प्रवृत्ति र प्रयोग तथा नेपाली भाषा शिक्षणका प्रायोगिक पक्ष गरी २ अनुसन्धानमूलक कृतिको पनि समीक्षा गरियो । जसमा क्रमशः १२ र १८ अध्याय छन् ।
कथासंग्रहको समीक्षा डा. भूमिराज बस्ताकोटी र अन्य २ कृतिको समीक्षा डा. यमनाथ तिमिल्सिना र उपप्रा.सुलोचना खनालले गरेका हुन् ।
कार्यक्रमबीच प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ विन्दवासिनी क्याम्पसका सभापति भानुभक्त आचार्य, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सभापति देवीलाल शर्मा, प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष डा. वीरबहादुर कार्की तथा पृथ्वीनारायण क्याम्पस प्राध्यापक संघका सभापति डा.लक्ष्मीशरण अधिकारीले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
लेखक शर्माले कृति प्रकाशन हुनुमा २०५५ देखिको निरन्तर प्रयास महत्वपूर्ण भएको स्मरण गरे।निरन्तर साधनाबाट मात्र यो कार्य सम्भव भएको उनको ठहर छ ।
यस पूर्व शर्माका अलिमियाँका लोकगीतको अध्ययन र विश्लेषण (२०६५), भाषा विज्ञानका केही सन्दर्भ (२०६९), प्रायोगिक भाषा विज्ञानका प्रमुख आयाम (२०६९), नेपाली भाषा शिक्षण (२०७४), उत्तरवर्ती साहित्य सिद्धान्तः प्रवृत्ति र प्रयोग, नेपाली भाषा शिक्षणका प्रायोगिक पक्ष (२०७८) र प्रायोगिक भाषाविज्ञान (२०७९) गरी ७ कृति प्रकाशन भइसकेका छन् । संस्थाका अध्यक्ष योगराज पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष हिममाया पौडेलले स्वागत तथा सहसचिव गणेश चालिसेले संचालन गरेका थिए ।